IsiShayina izimpahla, izingubo, izicathulo, amagajethi kanye izesekeli .... Kubonakala sengathi wonke umuntu uzama noma awuzami manje ukukhuthaza umkhiqizo efanayo esikhathini ethandwa kakhulu inethiwekhi Russian nomphakathi. Konke okunengqondo - kungani unganikeli abasebenzisi ikhono ukuthenga ngaphandle kokushiya VC Yinhle?
Naphezu ukuguqulwa ongaphakeme kanye ngokuphazamisa ephelele kubasebenzisi, kuqhathaniswa ezitolo eliphelele ku-intanethi, inani imiphakathi enjalo (amaqembu) VKontatke ezikhulayo ngokukhulu ukushesha. Lapha abalawuli ngandlela-thile ukuhlukanisa nenzalo yabo kusukela grey mass laba baziqambela okuthile izinto ezinjalo: engavamile avatar umphakathi, imenyu sokuqhafaza (okuyinto, lokho amashwa, ngokuzenzakalela ngicashela umsebenzisi), zonke izinhlobo amahlaya ngoba "wajoyina futhi wenza repost." Ngenxa yalokho, "abantu abaningi grey" iba ezimibalabala, kodwa namanje mass. Ngoba, kungakhathaliseki ukuthi ngesineke iqembu lakho umsebenzisi yayo ayishintshi lutho ... Usenomoya ukuze:
ukucinga iqembu uhlu olude izinkomba labo lelo;
surf izithombe umkhiqizo ofanayo emakhasini ehlukene;
funa incazelo umkhiqizo, zayo ezihlukahlukene, kanye nokwaziswa mayelana nokuba khona in the imibono ukuze lezo zithombe, noma buza imibuzo efanelekile leqembu Abalawuli ukuthi akuzona inthanethi njalo;
kusebenzisane abaqondisi izindlela ukulethwa futhi ubuyekeze isimo se-oda;
Konke lokhu kuthatha isikhathi esiningi futhi umthengi kanye nomdayisi.
Bambalwa abantu bazi ukuthi esitolo lokusebenza isiyatholakala ukuqasha for VKontakte Imali ngempela eyanele - ruble 16 ngosuku. kungenzeka okunjalo kunikeza VK VENDOR platform, esanyatheliswa ngo-February 2013. Lokhu okulandelayo izici eziyinhloko inguqulo yamanje: 1.0.1:
isibalo angenamkhawulo imikhiqizo;
navigation lula ngaphandle "kabusha" Amakhasi;
ikhono wengeze umkhiqizo izingxenye (usayizi, umbala, ivolumu, nezinye ukuhluka), kanye nekhono ukwabela okuzenzakalelayo intengo ushintsho, kuye ngokuthi imfanelo ekhethiwe;
ukugcina idatha mayelana nazo zonke amakhasimende akho e-database, ikhono ukwakha amaqembu ikhasimende futhi babela kubo izaphulelo ezithile;
ikhono ukudala amalebula imikhiqizo ( "Sale", "Okusha" njll) ukuthi izovela ekhasini isigaba;
"Uhlu Wish" - Amakhasimende wakho ungenza amabhukhimakhi ehlukile imikhiqizo ozithandayo, ukuze singathwesi uchitha isikhathi esiningi kakhulu kusesho yabo futhi;
ukukhetha kanye ukucushwa izindlela zokukhokha kanye ukulethwa, imisebenzi Inani eyengeziwe, kuhlanganise - izindleko emaphaketheni;
ikhono lokulawula izimpahla kuhlala izimpahla;
elula enqoleni yokuthenga + elula enembile ukuhleleka kuka inqubo;
ukwesekwa kulungiselelwa ezihlukahlukene;
Lokukhipha version 2.0.1 kuhlelelwe Juni 2013, kodwa njengoba sisebenzela sifinyelele izibuyekezo ozinzile futhi izingxenye ezengeziwe bayokhululwa nguqulo zesikhashana yesikhulumi nge ukuthuthukiswa khulula wonke amakhasimende ethu. Ngo ukuthuthukiswa version 2.0.1, senza ngonanzelelo ukusebenza VKontakte API ukwandisa kakhulu ukusebenza yesikhulumi.
Ungaphuthelwa ithuba lakho efanele yokuqhuba ibhizinisi kuleli, akungabazeki, isayithi ethembisa!
Yeka indlela okuyingozi kuyinto HPV 16
"Neocate" - inhlanganisela baby ukudla
Umlingisi Ron Perlman (Ron Perlman): Filmography nesithombe umlingisi